Shimbiro Fairy | Wararka Safarka
Maria | | Meelaha Dalxiiska loo tago, Getaways
Cilmiga cilmiga dhulka (Geology) waa mid indho sarcaad ku dheehan tahay kana duwan noocyada ay ku muuqan karto jaleecada hore. Tusaalaha tani waa qiiqa cirfiidka, oo sidoo kale loo yaqaan hoodoo, demoiselle coiffée ama haramka.
Kuwani waa qaabab dhagax ah oo dherer u taagan sidii haddii ay ahaayeen daaraha dhaadheer ee New York. Taawarrada dhagxaanta ay gooyeen dabaysha, roobka iyo barafka oo dherer ahaan kor u dhaafi kara 40 mitir oo qaabkooda khiyaaliga ahi ay ina xusuusinayaan adduunyo kale oo runti sidoo kale laga arki karo kuweenna Noocyada tiirarka dhagaxa ah kuma koobna aag ka mid ah meeraha. Waxaa lagu arki karaa meelo kala duwan. Waxaan ku tusaynaa meesha!
1 Kapadodiya (Turkiga)
2 Xadiiqadda Qaranka ee Bryce Canyon (Mareykanka)
Cappadocia waa mid ka mid ah meelaha gaarka ah ee ka jira Turkiga. Dabeecada iyo taariikhda ayaa isku qasma si ay u siiyaan booqdaha daqiiqado lama iloobaan ah. Mid ka mid ah waxyaalaha sirta ah ee uu gobolkani xifdiyo ayaa ah hawo-mareennada cirfiidyada ee dhaliyey qaar ka mid ah muuqaalka dabiiciga ee ugu quruxda badan dalka.
Halyeeygu wuxuu sheegayaa in Cappadocia ay deganaayeen dad caan ah iyo dad. Ururada isku dhafan ayaa laga mamnuucay wanaagga iyo sii wadida labada nooc, xeer aan had iyo jeer la raacin. Sida ku cad qisadan, mar sheeko iyo nin jacayl aad ayey u qaadeen oo dareenkooda ka tanaasuli kari waayey. Ka dib, boqoradii carwada waxay qaadatay go'aan adag: waxay u badashay carwooyinkii caanka ahaa xamaam iyo inay ragga ka dhacday awood ay ku arkaan. Si kastaba ha noqotee, waxay awoodeen inay ku sii jiraan daryeelka shimbiraha.
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in maanka lagu hayo marka la fiirinayo qiiqyada cirfiid ee Turkiga waa in laga heli karo meelaha oomanaha ah iyo qalalan sida lamadegaanka. Sababtaas awgeed, gobolka Kappadokiya waxaa ku yaal tusaalooyin cajaa'ib leh oo ku saabsan qiiqyada cirfiidyada gaar ahaan agagaarka Aktepe, oo ku yaal woqooyiga Kappadokiya. Si kastaba ha noqotee, ma tabi kartid aagagga Uçhisa ama Dooxada Palomar sidoo kale.
Xadiiqadda Qaranka ee Bryce Canyon (Mareykanka)
Waxay ku taal koonfurta-galbeed ee gobolka Utah una dhow magaalada Kanab waa Bryce Canyon National Park, oo u muuqata in laga qaatay boqortooyo khiyaali ah. Waxaa laga yaabaa inaysan jirin meel adduunka ka mid ah nabaad-guurka dabiiciga ah ee ka muuqda qaybtan ka mid ah galbeedka Mareykanka.
Dabayl, biyo iyo baraf ayaa baabi'iyay qalbiga Paunsaugunt plateau si ay u muujiyaan lamadegaanka qulqulaya cirfiidka ama hoodoos. Dadka asaliga ah ee Mareykanku waxay aaminsanaayeen in qiimayaasha cirfiidku ay ku saabsan yihiin dadkii hore ee ilaahyadu ka baqeen
Tani waxay dhalisay amphitheater qurux badan oo ay ku hareeraysan yihiin buuro iyo munaarado dhagax ah oo lagu baari karo fardaha ama lugta. Habeenkii waa ku habboon tahay in cirka la eego maxaa yeelay tani waa mid ka mid ah meelaha ugu mugdiga badan meeraha oo aad ku arki karto xiddigaha si aad u cadcad.
Dooxada Ebro waxaa ku yaal qiiqyo cirfiidyo dhowr ah, gaar ahaan meel lagu magacaabo A Peña Sola de Collas oo ku taal gobolka Aragonese ee Cinco Villas. Adigoon ka tagin isla ismaamulka, Alto Gállego waxaad sidoo kale ku arki kartaa tiirar dhagax ah geeska loo yaqaan Señoritas de Arás iyo sidoo kale gobolka Campo de Daroca ee Biescas.
Meelaha kale ee Isbaanishka ee ay sidoo kale ku jiraan qiiqyada cirfiidku waxay ku yaalliin lamadegaanka Bárdenas Reales, ee Castildetierra (Navarra).
In kasta oo ay u muuqato wax aan macquul ahayn, koonfurta Faransiiska ayaa wali leh sirro lagu ogaanayo dadka safarka ah. Gobolka Pyrénées-Orientales, halkaasoo ay ku taal magaalada Perpignan, waa Les Orgues d'Ille sur Têt, oo ah dhagax weyn oo dhagax weyn leh oo fiirinaya buurta Canigou oo qarniyo iyo biyo dabaylo ay ku xardheen.
Muuqaalka Orgues d'Ille sur Têt wuxuu leeyahay qaab dhismeed dhagax ah oo umuuqda inuu ku xardhay sawir qaade aan la aqoon, sida qiiqa cirfiidka. Waxay u egtahay amphitheater oo leh darbiyo lagu jaray tiirar waaweyn. Muuqaalka dhulku waa oomane inkasta oo ceeryaanta cirfiidku umuuqdaan kuwo sanado badan laga hadhin, runta ayaa ah inay ka jilicsanyihiin sida ay u muuqdaan maxaa yeelay biyaha roobka iyo dabaysha ayaa si tartiib tartiib ah wax uga beddelaya una beddelaya wax cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Shimbiraha Fairy
Socod ku dhex mara Quarter Latin ah, oo ku taal Paris